Ibhedi kunye nesidlo sakusasa .AL1.indawo yabucala ezolileyo.
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguChristina
I-chalet evaliweyo iqeshwe ngobunewunewu kunye ne-smart TV yefriji ethuleyo i-wifi, igumbi lokuhlambela elifudumeleyo umgangatho .5 imiz ukuhamba ukuya kumbindi wesixeko .isidlo sakusasa sibandakanyiwe.
I-chalet yethu yasegadini ikunika imfihlo enkulu, kodwa silapha ukuze sikuncede kwaye sikunike isidlo sakusasa esimnandi ukuze sikulungiselele imini.inkulu ngokwaneleyo ukuba abantu ababini (URL HIDDEN) akukho bantwana okanye iibhedi zenkampu.
4.98 ·Izimvo eziyi-379
4.98 out of 5 stars from 379 reviews
4.98 · Izimvo eziyi-379
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi379
I-St. Albans sisixeko esihle, esibonelela ngendala kunye nentsha, ininzi ukubona sikuhambo lwemizuzu emihlanu ukusuka kwicathedral kunye nombindi wesixeko, siyimizuzu emibini ukusuka eVerulam park kunye namachibi eyindawo ethandekayo ukuya (iwebhusayithi efihliweyo) Albans njengezixeko ezininzi zinamakhulukhulu eendawo zokusela kunye neeresityu ezilungileyo,zivuyiswa kukucebisa iindawo zokusela ezimangalisayo kunye neendawo zokutyela.imizuzu elishumi uhamba kude sisikhululo sedolophu apho uloliwe oya eLondon uyakuthatha imizuzu engamashumi amabini kuphela.ukuba ufika ngololiwe usazise ,ukuba kunokwenzeka siyavuya ukukuthatha.
Ngokuqinisekileyo siya kuba lapha ukuze sikwamkele, kwaye sinokukunceda ngokuhlala kwakho ngezinto oza kuzibona kunye nezindululo kwindawo yokutyela .sikubonelela ngesidlo sakusasa esithandekayo, kwaye siya kukuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na indlela, kodwa igumbi lakho nalo lithintelwe ngokupheleleyo indlu ekunika ubumfihlo bakho. ndinomnye umsebenzi ngoko ke ngamanye amaxesha xa kufika isaziso esifutshane ndiza kukunika isidlo sakusasa sepikiniki (URL HIDDEN) isidlo sakusasa emva kwexesha kanye ndisekhaya. ndithanda ukunika isidlo sakusasa esiphekiweyo nanini na (URL HIDDEN ) ndiyakwenza konke okusemandleni am ukwenza imisebenzi.
Ngokuqinisekileyo siya kuba lapha ukuze sikwamkele, kwaye sinokukunceda ngokuhlala kwakho ngezinto oza kuzibona kunye nezindululo kwindawo yokutyela .sikubonelela ngesidlo sakusasa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint Albans